२४ घण्टामा एक हजार भन्दा धेरै संक्रमित फेला परेपछि सरकारले अचानाक गर्‍यो यस्तो बोल्ड निर्णय ! «
२४ घण्टामा एक हजार भन्दा धेरै संक्रमित फेला परेपछि सरकारले अचानाक गर्‍यो यस्तो बोल्ड निर्णय !
Published : 18 August, 2020 9:02 pm
नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने देखिएको छ । मंगलबार मात्रै १ हजार १६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संख्या २८ हजार २५७ पुगेको छ । यो बीचमा सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्ने र कर्फ्यू लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्डहरू पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै पालना नगरेको खण्डमा कारबाही गर्न गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । धेरै जिल्लाहरुमा लकडाउन लगायत आवश्यक्ता अनुसार कार्यहरु हुन थालेका छन् । यो सँगै मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकको मुख्य १५ निर्णयहरु यस प्रकार रहेका छन् ।